Sida caadiga ah, shaqada ugu fiican ee kooxda IFDG. Habkani waa mid qurux badan, codadka waa kuwo macquul ah, guddiina waxay u muuqdaan kuwo si buuxda u shaqaynaya. Guul weyn ayaa lagu soo rogi karaa adoon sugin!
Boeing 767 waa nooca loo yaqaan twining airliner, kaasoo soo saaray shirkadda American Boeing. Waxay samaysay duulimaadkeeda koowaad 26 September 1981. Noocyada kala duwan ee rakaabka 767 waxay qaadi karaan dadka u dhexeeya 181 iyo 375 iyo nolol batroolku way kala duwanyihiin 9400 ilaa 12 200 km, iyadoo ku xiran nooca iyo qaabeynta cutubka.
Qoraaga: Equipe IFDG ...
Boeing 757-200 ALMAATA 25th guuradii FS2004